Kufezeke amaphupho ethola umfundaze | IOL Isolezwe
Kufezeke amaphupho ethola umfundaze
Isolezwe / 6 September 2012, 11:38am / LUNGI LANGA
UNKSZ Bongiwe Ndlovu ohlonishwe njengomunye wososayeni abavelele. Isithombe: Sithunyelwe
UKUFUNDA ezikoleni zasemakhaya akuzange kumenze aphelelwe yisifiso sokuphumelela kwezesayensi, kunalokho kwamenza wafuna ukugqabula zonke izibopho ukuze abe ngomunye wososayensi abahlonishwayo kuleli.
UNksz Bongiwe Ndlovu (27) ongowokuzalwa eXobho uthi ukube kubukwa lapho umuntu ephuma khona ukuze aphumelele ngabe akekho lapho ekhona.
Ungomunye wabesifazane abahlomule ngemifundaze yesayensi kwiDepartment of Science and Technology Women in Science Awards (Wisa).
Ungumcwaningi ophinde afundise esikhungweni semfundo ephakeme i-University of KwaZulu-Natal (UKZN), emnyangweni weLaboratory Medicine and Medical Sciences.
Konke lokhu kwakungeke kwenzeke uma bekungekhona ukuzimisela nokuzinikela emsebenzini wakhe.
Ubuka ukufinyelela kwakhe kuleli zinga njengendlela yokutshengisa ukuthi umuntu angakwazi ukuphumelela ngisho ephuma endaweni ehlwempu.
“Ngiqale ukusebenzisa ikhompyutha namanye amathuluzi anjengalawo asetshenziswa ezindaweni zokuhlola nokwenza izinto ezihambisana nezesayensi ngesikhathi ngiqala izifundo zami zemfundo ephakeme. Ezikoleni engangifunda kuzo zazingekho izinto zokufunda ezingubuchwepheshe, konke esasikufunda sasikufunda ngokutshelwa ngomlomo noma sikubone ezincwadini,” kusho uNksz Ndlovu.
Yize kube nzima ukufunda kwakhe, alizange lishabalale iphupho lakhe lokwenza izifundo zesayensi kunalokho wavumela isifiso sokuba yingxenye yomnyakazo wokuthola ikhambi lengculazi kwayikho okuhamba phambili.
Lo mfundaze ophinde ube yindondo yokumhlonipha uzokwenza kube lula kuye ukuthi aqhubeke nokwenza izifundo zakhe zePhD ku-Medical Virology ohlelweni lwe-HIV Pathogenesis eDoris Duke Medical Research Institute, eNR Mandela School of Medicine, e-UKZN.
Ucwaningo lwakhe lubheka ukugwema ukwanda kwegciwane lengculazi kubantu.
Ukuhlonishelwa umsebenzi wakhe akukhona okokuqala kule ntokazi njengoba ike yahlonishwa ngeTATA Africa Scholarship neColumbia University-South African Forgarty Scholarship for Training in HIV/AIDS Research. Usanda kwethula umbhalo kwenye yezincwadi ezishicilela ucwaningo.
Akamile kulokhu akwenzayo njengoba ethi uzimisele ngokuqeda izifundo zakhe zobudokotela aphinde abe ngomunye wabafundisi bemfundo ephakeme abahlonishwayo eNingizimu Afrika.
Ufisa sengathi impumelelo yakhe ingaba yisibonelo nakwabanye abafundi abanesifiso sokufinyelela lapho ekhona yize bephuma ezindaweni ezihlwempu.
Uthe unesifiso sokubamba iqhaza ekutheni kutholakale amakhambi okunqanda isifo sengculazi.
“Selokhu ngaqala ukubona indlela abantu abebethintwa ngayo yigciwane lengculazi, kungenze ngafuna ukubamba iqhaza ekutheni kutholakale indlela yokulwa nalo. Ngibona kuzohamba kuhambe kube khona ikhambi lokulwa nengculazi futhi ngifuna ukuba yingxenye yesisombululo ekulweni nalesi sifo,” kuphetha uNksz Ndlovu.